Anatoly filatov: imininingwane yokuphila edumile poker isidlali
Wokuzilibazisa, Isenzo esiyingozi imidlalo
Russian professional poker umdlali - Anatoly filatov - nakuba hhayi indoda edume kakhulu wezwe lakhe, kodwa, nokho, ngokushesha ephumelela global. Anatoly filatov wenza poker indlela yabo yokuphila, futhi ngokuqinisekile kwaletha ke ezingeni qualitatively entsha.
Ngemva interview umdlali owaziwa zonke izintatheli ukuthi lowo c ngenjabulo abelana imicabango yakhe, imizwelo kanye nekulangatelela.
Lapho exoxa ne-Anatoly kaningi uyavuma ukuthi ivulelwe imibono yabanye abantu, futhi uyazicabangela yena ngobuchule okuningi kunabantu abaningi eRussia.
Esikhathini izindaba mayelana efulethini lakhe eMoscow umdlali amazwana nge amanani isikhala izindlu inhloko-dolobha yaseRussia. Qasha efulethini elincane eqolo. Ngokwesibonelo, ukuthenga 200 m 2 kwelinye izwe, ungakwazi ukukhokha imali ezincane kakhulu kunaleyo uye wachitha encane (40 m2) sokuhlala eMoscow.
Filatov okokuqala uzuze imiphumela okuphawulekayo yangempela (non-virtual) mqhudelwano okokuqala ngo 2012 e Vienna. Khona-ke indawo yesibili futhi imali umklomelo 10,000 euro yatholwa Anatoly filatov. Umlando wakhe uqukethe ulwazi ukuthi kamuva kulekelelwa nomholo wakhe 366700 euro yokubhadala.
Inani ambikele yakhe kuze $ 1.6 million.
ukuvakashelwa njalo US
Filatov kuyinto isivakashi njalo-United States, futhi isetshenziswa ukwenza imali poker tournaments emazweni ahlukahlukene, inani esikwaziyo eziyisishiyagalombili.
Ngo-blog yakhe mayelana travel e-United States, uthi okuningi mayelana ukungefani kwamasiko sezulu social. Lokhu umbono kuyinto ngempela ehlukile umuntu ovela ezweni efana eRussia, lapho abantu abaningi kuzo emazweni angaphandle ngenhloso nje uphumule futhi ube nesikhathi esihle.
Poker emndenini wabo uthando lwakhe kuphela
Lapho exoxa ne-izintatheli umdlali akushilo ngokuphindaphindiwe ukuthi angathanda ukuwumisa abaseRussia ukwakha umbono omubi kwabakhileyo Russia phesheya, njalo ukudakwa nasekwelapheni ngendelelo aphatha ngayo abanye. Yena ngokwakhe uyavuma ukuthi yena angiphindanga ngabhema futhi ungaphuzi utshwala, naphezu kweqiniso lokuthi abazali bakhe abazange wamenqabela lokhu.
Abazali bakhe baye njalo asekelwe kulo, nakuba beqonda poker kuphela njengendlela yokuzilibazisa.
Ngokusho kwakhe, amaRashiya amaningi baphuze kanye bluffing kakhulu. Kodwa kwakungeyona ngaye, njengoba esho, ngoba eshadile.
abazana naye nomkakhe (kwakunjalo eminyakeni 19) okwenzeka ngesikhathi lapho omunye inkomfa owawuse, lapho bobabili baba khona.
Unkosikazi Anatoliya Filatova - fan of poker. Ujabula kakhulu ngokubona ukuthi akuyona uyakuthanda poker nokutadisha kwengqondo. Uthi akasoze akwazi ukushada umuntu odlala ku-poker, kule yena ncamashi uyaqiniseka. Anatoly filatov behlukene nomkakhe, wathi, uma waba nesithakazelo poker.
Kwakunamahemuhemu okuthi Anatoly filatov, wahlukanisa nomkakhe kodwa eqinisweni akusiyo. Bavame ukuhamba ndawonye izenzakalo eziningi bukhoma, naphezu kweqiniso lokuthi umkayo umdlali poker.
Izincwadi Izintandokazi nokuzilibazisa
Uyabathanda ukuvakashela kwamanye amazwe ukuze ubone ukuthi abanye abantu baphile futhi ukucabanga. Uthi kwaba e-Asia, e-Europe ne-United States futhi China. Yena othanda izincwadi Lao Tzu (sefilosofi Chinese owaphila kusukela 604-531 BC), izincwadi eziphathelene nobuBuddha, kanti a fan of big Bruce Lee (funda izincwadi ezingaba yishumi ngakho).
Ngaphezu i-poker, ekuzithabiseni izinkanyezi kufanele wanezela:
ukujwayelaniswa nesiko nezincwadi emazweni ahlukahlukene;
lokuqoqa amahembe ezimibalabala;
Ukucinga umhlaba wonke izibuko ezintsha nge usebe ezimibalabala;
Ngaphezu ngayinye umfanekiso waso njengoba izesekeli elikhanyayo stylish efana ezinemibala nobhothayi.
Ukuphuza i-poker semthethweni
Anatoly filatov kulandela inqubo semthethweni poker inthanethi eRussia, ngoba asevaliwe kulesi umdlalo. Lo mbuzo Sekuyisikhathi eside ithathwa ku Kremlin. Semthethweni poker inthanethi kungaletha i izigidi ezengeziwe 146 zamaRandi ukuze isabelomali sikahulumeni, kodwa umthetho namanje kude ekufezeni umphumela wokugcina lapho kwemukelwa Bill.
Yena ikakhulukazi ukhetha ukudlala ku PokerStars.
Izinyathelo kuqala poker
Watadisha computer science ngesikhathi MSU, kodwa hhayi kahle izinhlelo. Ngalesi cwaningo e Moscow, Anatoly filatov futhi waba nesithakazelo poker.
Lapho eneminyaka engu-eyunivesithi, umngane wammemela ukubukela i-poker e-TV. Abadlali befake izibuko futhi hoodies, ukuthi kakhulu yabakhanga le poker izinkanyezi esizayo. Wakuthanda ukubukela inqubo umdlalo. Ngokushesha le ndoda yaqala ukudlala yena imali play. Wayengenaso umqondo lokho akwenzayo, ngisho nalapho eqala ukudlala for imali yangempela. Ngaye, kwaba nje kumnandi, futhi ngemva kwesikhathi esithile waphinde waqala ukuba banake ekutadisheni amasu poker.
Wayefisa edlala World Series of Poker. Uma wakwazi ukufeza lokhu, wanquma ukuthi kwase kudingeka sisebenzise bazakhele imali.
Ngemva walahlekelwa okokuqala umdlalo omkhulu ngaye inani $ 4,000, waqhubeka amavidiyo ku PokerStrategy futhi CardRunners, futhi wadlala eziningi poker.
Wayengumuntu 21 kuphela lapho eya e-Las Vegas for umdlalo wakhe wokuqala wangempela. Nakuba imiphumela yakhe e-Las Vegas abaphumelelanga kakhulu, wayeqiniseka ukuthi uzoqhubeka nokudlala, futhi ekugcineni sifinyelele imiphumela okukhulu e-United States.
Poker kancane kancane abe ephawuleka kakhulu ekuphileni kwakhe nje yokuzilibazisa.
Uma bebuzwa ukuthi ukuchaza isitayela Russian umdlalo, wathi lapho isiqalo Russian Bluff, abakwazi ukuyeka. Uma Russian ngakho ukwenza ohlakaniphile akamane bluffing, kwakuyodingeka uwine njalo umncintiswano.
Wathi uma ivuliwe bangaphambi imidlalo akusho ukulala, adle, bese lokhu waphumula, ekhathele, uqala ukwenza okuningi amaphutha.
Isidlali ukholelwa ukuthi i-poker - umdlalo kubantu abanolwazi abakwaziyo basebenzise ngayo imali nesikhathi kuso. Poker- le game akusilo abampofu, khona-ke akuyena zilingana nezinhlobo izinhlobo ezivamile ezivamile umsebenzi. Lona umdlalo nomnotho abafuna ukufunda isu. Kubo, kumnandi, futhi uhlobo inselele izimbangi.
Esikhathini esizayo esiseduze angathanda ukwandisa coaching yabo.
Imiphumela filatov, okuyinto akwenza eminyakeni, umvumele ukuba udlale ngesikhathi tournaments enkulu, kodwa namanje ohlakaniphile wokuxosha izimali zabo.
Kuyobonakala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi yena Anatoly filatov okudingayo ukuze ube nengxabano njalo abadlali best in the world, kodwa okungenani asisifushane lemali futhi ukungalethembi amakhono abo siqu.
Imithetho Poker Wabasaqalayo futhi inhlanganisela
Texas Hold'em: imithetho. Texas Hold'em: inhlanganisela
Crescent Solitaire - ifa esidlule
Casino imidlalo: imithetho blackjack
Lady e amabhiliyade. Michaela Tabb
Yini ungabona kusukela Disney opopayi for girls? Yini ungabona kusukela opopayi ngoba intsha: uhlu
Njengoba "windose 7" ukuze usethe i-microphone: imfundo
Fish ne anyanisi kanye izaqathe multivarka: zokupheka okumnandi
Lapho ukufunda izibuyekezo mayelana izimonyo ngaphambi kokuyithenga
Cafe "Dioland" Kirov: ukubuyekezwa, izincazelo, amamenyu kanye nokubuyekeza
Mahhala swaddling izinsana: izici, imithetho kanye nemihlahlandlela
Yini ongasinikela ofunda ngoMashi 8? Amavesi siyakuhalalisela ofunda ngoMashi 8
Yini okufanele ibe ikhabethe eziyisisekelo abesifazane owayephila?